Kumiswa, Ukufunda abanokukhubazeka
Njalo ingane efuna nithole imfundo enhle, futhi akuzona izingane icala, uma uneminye kwezinso ahleleka ngokomzimba noma ngokwengqondo. Kid nge kwezinso ethile ekuthuthukiseni yokukhuluma naye unegunya lokuthola ukuthi lufundiswe ezikoleni, amanyuvesi kanye nezinye izikhungo zemfundo. Yiqiniso, ingane enjalo kungaba ungakhululekile ukusebenza nezingane abangenalo ngeziphambeko ezinjalo. Ngakho-ke, kukhona uhlelo aguqulelwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu elenziwe ngokuvumelana nazo zonke izimfuneko izingane ezinjalo.
Kungani isimiso esinjalo?
It is ngokukhethekile eyenzelwe izingane kwezinso ekuthuthukiseni yokukhuluma. ingane enjalo ngeke bakwazi ukuthuthukisa evamile i team abavamile, njengoba onezici ezithile, okuyinto kudingeka isimiso esikhethekile aguqulelwe izingane ngenkulumo abanokukhubazeka.
Ngokwesibonelo, ingane ngokuhlukahluka okuthile esebenzisa uhlelo esinjalo uzokwazi ukuzizwa ekhululekile futhi ukuthuthukisa ngokuhambisana amakhono ayo. Phela, izingane abavamile cha perceive labo athé ukwehluka ekuthuthukisweni kwabo. Lezi zingane "elikhethekile" bathande bakugcone, abanakho ithuba iSilekeleli Sokwazisa, abakwazi bazithola kulempilo. Kodwa akuzona enecala ezalwa emhlabeni nge ukuhlukumeza okunjalo. Uhlelo Ithethwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu kuba uhlobo kwangigcina lezi zingane. Ngokwezibalo, iningi lezingane ukuqeda ukuntula kwakhe futhi uqhubeke latawufundziswa kakade ezikoleni ezivamile futhi amanyuvesi.
Lokho kuhlanganisa uhlelo ingashintshwa?
Uhlelo Ithethwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu zasenkulisa yakhelwe izikhungo ukuthi ngokukhethekile emfundweni yezingane ezikhubazekile. Injongo yalolu hlelo ukuthuthukisa zonke amakhono we Ingane onesifo ngeziphambeko ukuthuthukiswa yokukhuluma, kanye ochwepheshe. Lokhu kuqeqeshwa kuhloswe ukuba sikwazi qondanisa kanjani kangcono futhi ugweme ukuhlukumezeka. Naphezu izingane zawo "ethile" Kufanele uthole imfundo enhle kuzo zonke izici zokuphila: funda ukubhala, ukufunda ukubala.
Kodwa umgomo oyinhloko lolu hlelo ukuze balukhulume kahle inkulumo exhunywe ingane ukuze esikhathini esizayo ukuze ukwazi ukuqhubeka ukufunda ezikoleni ezejwayelekile hhayi unezinkinga imfundo. Uhlelo Ithethwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu kuphumelela kuphela uma kungekho ezinye kwezinso ekuthuthukisweni. Lesi sakhiwo yakhelwe kuphela ukuxazulula izinkinga ne zokukhuluma.
Uhlelo Ithethwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu e zasenkulisa has eziningi izici. Ngokwesibonelo, ezimweni ezinjalo, kukhona sisondelene abazali. , Kulesi simo, ngakho akunakwenzeka uma izinkulisa abavamile noma ezinye izikhungo pre-school kungaholela ingane ekuseni eyolanda kusihlwa. Abazali kumelwe ngezinye izikhathi uze esikoleni ukugcina ingane yakhe. Kuyadingeka bayoqhuba amakilasi futhi ekhaya ukusheshisa lonke inqubo.
Ekilasini kukhona eziningi izisebenzi thola ndlela yokukhulisa ingane ngayinye futhi uzame ukuza inkinga ethile ngamunye. Phela, sonke sike sibe nayo ezahlukene inkulumo iziyaluyalu: umuntu ungcono noma kukubi kakhulu. Futhi, izingane zafunda Usululungele umsebenzi ithimba, ukuba nobudlelwano ekilasini futhi ukuthola ulimi ofana ngakho nofunda nabo abo.
Uphi amygdala, futhi lapho yenza imisebenzi?
Geneva - inhloko-dolobha kuliphi izwe? Umuzi Geneva lapho?
Indlela ukubhaka isinkwa kwesokudla
Ukukhipha isisu ekukhulelweni ekuseni: iyashelela, kancane esiyingozi